Lewandowski Oo Si Cad Uga Hadlay Waxa Ka Jira In XAASKIISU Ay U Diiday Inuu PSG U Wareego – Latest Sports News
Lewandowski Oo Si Cad Uga Hadlay Waxa Ka Jira In XAASKIISU Ay U Diiday Inuu PSG U Wareego
Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee Robert Lewandowski ayaa markii ugu horreysay ka hadlay waxa ka jira wararka suuqa soo galay ee sheegaya in xaaskiisu ay u diidday inuu ku biiro kooxda reer France ee PSG.
Wakiilka Lewandowski ee Cezary Kucharski ayaa bishii January sheegay in halyeyga reer Poland ay suurtogal tahay in xagaaga uu ka tago Bayern Munich oo uu ka dego horyaallada Premier League iyo Ligue 1 midkood.
30 jirkan ku fiican dhalinta goolasha ayaa waxa kale oo lala xidhiidhiyey kooxda reer Spain ee Real Madrid oo raadinaysa beddelka Cristiano Ronaldo, laakiin dhawaan ayuu xaqiijiyey in aanu u soconin Los Blancos.
Lewandowski oo wax laga waydiiyey waxa ka jira wararka sheegaya inuu kusii jeedo PSG balse ay ka hor taagan tahay xaaskiisa oo aan doonaynin inay ku noolaato waddanka Faransiiska, ayaa waxa uu sheegay in gebi ahaanba ay yihiin warar been abuur ah, waxaanu yidhi: “Maya. Marna maan maqal wararkaa saqajaanimada ah. Waa warar been weyn ah oo aanay waxba ka jirin.”
Lewandowsi oo u warramayay wargeyska Telefoot, waxa kale oo uu sheegay in ay jiraan halbeegyo lagu cabbiro go’aamada lagu gaadhayo in koox laga tago, taasina aanay isaga hadda u muuqanin oo uu ku faraxsan yahay Bayern Munich, waxaanu yidhi: “Mararka qaarkood, waxa jiraa halbeegyo badan oo door-weyn ciyaara marka mustaqbalka go’aan laga gaadhayo, laakiin anigu Bayern Munich ayaan ku faraxsanahay. Mar hore ayaan fursado ka helay kooxo Faransiis ah, laakiin wax walba idiinma sheegi karayo.”